Alto da Prata - I-Airbnb
Alto da Prata
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguGenesio
Indlu entle yeentaba encotsheni yeVale da Prata kubathandi bendalo kunye nokuphila kakuhle. Indawo ezolileyo kunye neyodwa enamanzi ahambayo emnyango, imbonakalo entle kunye nengxangxasi entle ngasemva. Ilungele ukuhamba, ukuhamba, ukukhwela ihashe okanye ukuphumla nje emanzini, ngesitovu senkuni okanye ngomlilo ophantsi kwesibhakabhaka esineenkwenkwezi. Ibekwe eVale da Prata apho ungandwendwela iingxangxasi ezintle, ufunde malunga nendlela yokuphila yasekhaya kwaye uthenge iimveliso ezitsha kunye nezinto eziphilayo. Iparadesi!
Iindwendwe ziya kuba neemfihlo ezipheleleyo, ngaphandle kwabamelwane, phakathi kweentaba, amahlathi kunye neengxangxasi. Indlu ikhululekile kwaye inamandla elanga, ekuvumela ukuba uvule izibane kunye nokutshisa amanzi kwishawa. Indlu inesiginali ye-WI-FI. Ukongeza kwisitovu sokhuni, kwakhona kwakukho isitovu segesi kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko zasekhitshini kunye nefriji yombane. Ikwanelinen yokulala, imiqamelo kunye neengubo.
Ifumaneka kwindawo yasemaphandleni, le ndawo inika uxolo nonxibelelwano nendalo. Siyi-27km ukusuka eVisconde de Mauá, ukuwela ukuya eMinas Gerais. IMirantão yilali ekubhekiswa kuyo iivenkile kunye neeresityu kwaye ikumgama oziikhilomitha ezi-5 ukusuka endlwini. Iindlela zimdaka. Kukho iingxangxasi ezi-3 kwipropathi kwaye indlu yimizuzu engama-20 yokuhamba ukusuka eCachoeira da Prata, indawo yabakhenkethi eneengxangxasi ezi-3 ezinkulu kunye nequla.
Umbuki zindwendwe ngu- Genesio